माछा मार्ने जालमा १ सय किलोको अजिङगर परेपछि | Jukson
एजेन्सी / भारतको महाराष्ट्रमा दुई माझीले त्यस्तो घटनाको सामना गरे, जसको उनीहरुले कहिल्यै कल्पना समेत गरेका थिएनन् । माछा मार्न जाल फालेका महेश पटेल र गोकुल पटेल त्यतिबेला निकै खुसी थिए, जब जाल निकै भारी देखियो । उनीहरुले जालमा ठूलै माछा परेको अनुमान लगाएका थिए । जति तान्दा पनि जाल निकाल्न कठठिन भयो र उनीहरुले संघर्ष जारी राखे । जब जाल बाहिर निस्कियो तब १ सय किलोको अजिङगर देख्दा उनीहरुको सातो गयो । उनीहरुले तुरुन्तै जाललाई त्यही छाडिदिए र दौडदैँ समुन्द्री तटमा आएर सहयोगको याचना गरे । त्यस क्रममा अजिङगरसँगै थुप्रै माछा पनि जालमा परेका थिए ।
अजिङगर जालमा फसेको थाहा पाएपछि स्थानीय सर्प विशेषज्ञ किशोर गायकवाङ आफ्ना सहयोगी हितेश मेहताका साथ घटनास्थलमा पुगेका थिए । उनले पानीमा तैरिरहेको अजिङगरलाई जालसहित बाहिर निकाले । त्यसपछि गायकवाङले अजिङगरको निरीक्षण गरे । त्यहाँ अजिङगरको शरीरमा कुनै चोट देखिएन । त्यसपछि अजिङगरको लम्बाई र वजन नापियो । किशोरले भुलवस अजिङगर जालमा अल्झिएको हुनसक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘अजिङगर निकै रिसाएको थियो । बिस्तारै त्यसलाई शान्त गरियो ।’ माझी तथा गाउँका अन्यको सहयोगमा किशोरले अजिङगरलाई नजिकैको पेट्रो पम्पमा लगे र त्यसपछि मुम्बईस्थित संजय गान्धी राष्ट्रिय उद्यान केन्द्रमा पठाए । जालमा फसेको ३ मिटर लामो अजिङगर राक पायथन प्रजातीको रहेको त्यसपछि पत्ता लाग्यो ।
गुगलदेखि याहुसम्मः विश्व चर्चित कम्पनीहरुको यसरी भयो न्वारान, नामको अर्थ यस्तो पो !
Charlie Le Mindu Naked Fashion Shows – Top 10 Pictures
इन्डोनेसियाको बाली द्वीपमा ‘रेड वार्निङ’ जारी, ज्वालामुखी विष्फोटको खतरा
वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि
सलमानको सुल्तानले कमायो ५ दिनमा एक सय ८० करोड